Somaliland Oo Ugu Dambayn Go’aan Ka Gaadhay Qaadka Soo Gala Dalka – Allsomali.net
HomeSomalilandSomaliland Oo Ugu Dambayn Go’aan Ka Gaadhay Qaadka Soo Gala Dalka
Gudida heer qaran ee u diyaar-garawga iyo ka hor taga xanuunka COVID-19 oo uu shir gudoominayo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Ahna Gudoomiyaha Gudida ee Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Seylici) ayaa shir la yeeshay ganacsatada Qaadka ee dalka Somaliland.
Shirka ayaa lagaga hadlay sidii loo joojin lahaa qaalka Dalka Soo gala inta lagu hawlanyahay ka hor tagista faafista xanuunka Dudniada Afeeyay ee COVID-19.
Gudida heer qaran ee u diyaar-garawga iyo ka hor taga xanuunka COVID-19 Ayaa maanta si Rasmi ah u soo saaray go’aamada hoos ku qoran.
1.In laga bilaabo maalinta Axada oo ay taariikhdu tahay 26 bisha April 2020 in Somaliland laga joojinayo Keenista Qaadka iyo waliba ka ganacsiga qaadka ilaa laga gaadhayo 21 bisha May ee sanadk 2020 oo ku beegan 2 cisho ka hor maalinta ciidda iyada oo laga xisaabtami doono xaalada is badal ee xanuunka COVID-19.
2.Maamulada Gobolada iyo degmooyinka dalka iyo waliba ciidamada kala duwan ee qaranka waxa la farayaa in ay qabtaan isla markaasna gubaan wixii qaad ah ee soo gala dalka inta lagu jiro wakhtiga kor ku xusan.
Kiisaska & Dhimashada Xanuunka Covid-19 Ee Somalia Oo Sii Badanaysa